I-Electron Inkcazo kwiSayensi
I-Glossary Glossary Inkcazo ye-Electron
I-electron iyindawo ehlawuliswayo engekhoyo ye- athomu . Iifowuni zikhona ngaphandle kwendawo ejikeleze i- nucleus ye-athomu . I-elektron nganye ithwala inyunithi enye yexabiso elibi (1.602 x 10 -19- coulomb) kwaye linomlinganiselo omncinci kakhulu xa kuthelekiswa ne- neutron okanye iprotton . Iimfowuni zincinci kakhulu kuneeprotoni okanye i-neutron. Ubunzima be-electron ngu-9.10938 x 10 -31 kg. Oku malunga ne-1/1836 ubunzima beproton.
Kwizinto ezinamandla, ii-electron ziyizona ndlela eziphambili zokuqhuba ngoku (ekubeni iiponononi zikhulu, ngokuqhelekileyo zibophelelwe kwinucleus, kwaye kunzima ukuhamba). Kwiimveliso zamanzi, ii-carrier zithatha rhoqo.
Ubungakanani bee-elektronike kwakuchazwe nguRichard Laming (1838-1851), isazi sefilosofi sase-Ireland uG. Johnstone Stoney (1874) kunye nezinye izazinzulu. Igama elithi "i-electron" laphakanyiswa okokuqala nguStoney ngo-1891, nangona i-electron yayingatholakali kwaze kwaba ngowe-1897, ngu-physics waseBrithani uJJ Thomson .
Uphawu oluqhelekileyo lwe-electron luyi-e. I-anti-particle ye-electron, ephethe i-charge enamandla kagesi, ibizwa ngokuba yi-positron okanye i-antielectron kwaye ibonakaliswe ngokusebenzisa isimboli β - . Xa i-electron kunye ne-positron idibanisa, zombini iinqununu ziyabhujiswa kwaye zikhishwa imilayezo ye-gamma.
Iifowuni zibhekwa njengoluhlobo lwengqungquthela yeprayimari kuba ayilwanga ngamacandelo amancinci. Zihlobo lomqolo we-lepton kwaye unomlinganiselo omncinci kunoma yiyiphi i-lepton ehlawulisiweyo okanye enye inxalenye yecala.
Kwi-mechanum mechanics, ii-electron zibhekwa njengento efanayo, ngenxa yokuba akukho propati yezinto ezisemgangathweni ingasetyenziselwa ukwahlula phakathi kwabo. Iifowuni zingatshintshana izikhundla komnye ngaphandle kokubangela utshintsho olubonakalayo kwinkqubo.
Iifowuni ziyakhangwa kwiincinci ezithintekayo eziphathekayo, ezifana neeproton.
Ingaba okanye ingenayo into enombane onomnxeba wenqwelo-mbane inqunywe ibhalansi phakathi kwenani lee-elektroni kunye nexabiso elihle le-nuclei ye-athomu. Ukuba kukho ii-electrons ezininzi kuneentlawulo ezifanelekileyo, izinto zithi zihlawulwe kakubi. Ukuba kukho ukugqithisa kweeponononi, into iyicatshulwa ngokuqinisekileyo. Ukuba inani lee-elektrononi kunye neeponononi zilinganiselwe, izinto zichazwa ngokuba zingekho zombane.
Iifowuni zikwazi ukuhlala zikhululekile ngaphandle kwendawo yokucoca. Babizwa ngokuba ngama-electron akhululekileyo . Iimfowuni kwisinyithi ziziphatha njengokungathi zi-electrons zamahhala kwaye ziyakwazi ukunyuka ukuvelisa umthamo wexabiso elibizwa ngokuba ngumbane wamandla. Xa ii-electron (okanye iiponononi) zihamba, i-magnetic field yenziwe.
I- athomu engathathi hlangothi ineenani elifanayo leeprotoni kunye nee-elektroni. Ingaba nenombolo eguqukileyo yeetyutron ( ukwenza i-isotopes ), kuba i-neutron ayithwali inkokhelo yombane.
Iifowuni zinempahla yeesibini kunye namaza. Ziyakwazi ukuphazamiseka, njengama-photons, kodwa ziyakwazi ukudibanisa kunye nezinye iindidi, njengenye into .
I-atomic theory ichaza i-electrons ejikeleze i-proton / neutron nucleus ye-athomu kwiigobolondo. Nangona kunokwenzeka ukuba i-electron ifumaneka naphi na kwi-athomu, mhlawumbi iyakwazi ukuyifumana kwikhebhile yayo.
I-electron ine-spin okanye i-intlinsic angular momentum ye-1/2.
Iingcali zenzululwazi ziyakwazi ukuhlukanisa kunye nokubetha i-elektroni enye kwidivaysi ebizwa ngokuba ngumgibe wePenning. Ukususela ekuhloliseni i-electrons enye, abaphandi bafumene i-electron radius enkulu yeemitha ezili-10 -22 . Ngeenjongo ezininzi zokwenza, iifowuni zicingelwa ukuba ziyizityholo, ezizityholo zombane ezingenakunzima.
Ngokomxholo omkhulu we-Big Bang, i-photons yayinamandla okwaneleyo kwi-millisecond yokuqala yokuqhuma ukuqhubana kunye nokwenza iimbini ze-electron-positron. Ezi zibini zibhubhane, zikhupha iiphoton. Ngezizathu ezingaziwa, kwafika ixesha apho kwakukho ama-electron ngaphezu kwama-positron kunye neeponononi ezingaphezu kwama-antiprotons. Iiponononi eziseleyo, i-neutron kunye ne-elektrononi zaqala ukusabela ngabanye, zakha i-athomu .
Izibophelelo zeMichiza zibangelwa ukutshintshwa okanye ukwabelana ngama-electron phakathi kwama-athomu. Iifowuni zisetyenzisiweyo kwizicelo ezininzi, ngokunjalo, njengeibhubhu zokucoca, iipatomultiplier tubes, i-cathode ray tubes , imizila ye-particle yophando kunye ne-welding, kunye ne-laser-electron laser.
Amagama athi "i-electron" kunye "nombane" ayilandela imvelaphi yawo kumaGrike asendulo. Igama lesiGrike elidlulileyo le-amber laliyi- elektron . AmaGrike aphawula ukuxubisa ubomvu kunye ne-amber ebangela ukuba i-amber ithande izinto ezincinci. Olu luvavanyo lokuqala olurekhodiweyo ngombane. Isazi senzululwazi uWilliam Gilbert siqulunqe igama elithi "electricus" ukubhekisela kwipropati ekhangayo.
Ikhefu loTshintsho Inkcazo
I-Orbital - Inkcazo kwiKhemistry
Ngubani Ozalelwa Ngaphandle Kokuqala Kwezono?
Iimpawu eziqhelekileyo ezingabonakaliyo zesiLatini: I-Etc., u-Eg, no-al, kunye no-Ie